စာပေလုပ်အားပေးလေး အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်။
ဂွတ်ထ .. အားပေးနေတယ်ဟေ့ ...း)
ကောင်းတယ် မောင်မျိုးရေ ... ဒါမျိုးက အတွေ့အကြုံလဲရ ဗဟုသုတလဲရ ကုသိုလ်လဲရပါတယ်။
လူငယ်တွေ တက်တက်ကြွကြွလုပ်ကြတာဆိုလို့ အားရစရာပဲ။ ဂျာနယ်လေး ရေရှည်တည်တံ့ပါစေ ... ။
သြော် ဘယ်မှာနေနေ စာပေကို ၀ါသနာပါတဲ့သူတွေက တကယ်ကိုပါကြတာပါပဲလေ..
ဂုဏ်ယူပါတယ်ကိုမျိုးရေ...ဝါသနာပါရာ အလုပ်မှာ.. လုပ်အားပေးခါင့်ရတာ လည်း ပီတိဖြစ်စရာ...ပါပဲ :)
ဝမ်းသာတယ် ညီရေ..၊ တကယ်ပဲ အကျိုးရှိတဲ့ လုပ်ရပ်ပါပဲ..၊ Carry on...!
အမှန်တော့ မောင်မျိုးလို စာရေးကောင်းတဲ့သူတွေ ဒီလို လုပ်သင့်ပါတယ်။ (စောစောစီးစီးကထဲက)
အားပေးပါတယ်ဗျာ .. စာပေနဲ့ အသိဥာဏ် တိုးတက်ဖို့ လုပ်ရပ်တိုင်းဟာ တန်ဖိုးရှိပါတယ်ဗျာ .. ပိုပြီး အဆင်ပြေ ချောမွေ့ပါစေဗျာ
ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းပါ မောင်မျိုး....။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မပါဝင်ရပေမယ့် အဝေက အားပေးပါတယ်...။
အားပေးလျှက်ပါဘဲ။ စာပေဆိုတာ လူတွေရဲ့ မိတ်ဆွေဘဲ မဟုတ်လား။
လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ခဲ့တာဘဲ...
Cheers Bro! Bravo.
ရှေ့ဆက်ပြီးလည်း စာပေအတွက် အကျိုးရှိတဲ့ တစ်ထောင့်တစ်နေရာက ထမ်းရွက်နိုင်ပါစေ
မောင်မျိုးအတွက်လည်း စာပေနယ်တစ်နေရာမှာ ခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်နိုင်ပါစေလို့ ..
ကောင်းတယ် မောင်မျိုးရေ...တကယ်အကျိုးရှိတယ်...အမလည်း နီးရင် ပါဝင်အားဖြည့်မှာ အသေအချာပဲ...
မစော...ဟုတ်ကဲ့ အခမဲ့ ဝေမှာပါ လောလောဆယ် စောင်ရေ ၁၅၀ လောက်စတယ်ဗျ ။
မဲဆောက်က ဂေါက်သီးရိုက်ကျင့်တဲ့ ကွင်းနားမှာ ဆရာဦးငြိမ်းဝေရဲ့ စာကြည့်တိုက်ရှိတယ်လေ။ စာအုပ်တွေ စုံမှစုံပဲ။ အလုပ်သမားတွေအတွက် ဖွင့်ထားတာ။ သွားကြည့်ပါလား။